Ny Tsenam-barotry Ny Fifandraisan-davitra: Novain’ny Fitambaran’ny SFR-Numericable? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2014 18:43 GMT
Miaraka amin'ny fitambaran'ny SFR sy ny Numericable, mivonona ny hiatrika toe-javatra goavam-be ny tsenam-barotry ny fifandraisan-davitry ny orinasa. Tetikasa goavana izany, ireo orinasa roa ireo rahateo dia efa mitoetra tsara eo amin'ny tsenam-barotra matianina. Raha te-hanana toe-javatra goavana sahala amin'izay, mila miverina amin'ny taona 2005, tamin'ny fotoanan'ny firaisan'ny Cegetel sy ny Neuf Telecom, izay nanome ny Neuf Cegetel, izay lasa sampan'ny orinasa SFR avy eo.
Hatramin'ny 2010, mpandray anjara maro teo amin'ny Aterineto sy ny fifandraisana no nanjavona tamin'ny alalan'ny fitambarana (Club internet, AOL, Telecom Italia, Cegetel, sns.). Efa an-taonany vitsivitsy izao no misy fanavaozan-drafitra ara-teknika eo amin'ny tsenam-barotra noho ny finiavana misongan'ireo mpandraharaha hanamafy ny fisiany na eo amin'ny tsenam-barotry ny antso an-tariby, na ny finday. Noho izany fomba fijery izany indrindra no hitambaran'ny SFR sy ny Numericable, mba hamaliana ireo hetahetan'ny mpanjifa eo amin'ny lafiny sandany sy hamoràny.
araka ny fanadihadian'i Lionnel Piar, filoha lefitry ny Fifandraisan-davitra ao amin'ny CGI Consulting.
Izany no mandindona mivantana ny toerana bahanan'i Orange eo amin'ny tsenam-barotra B-to-B. Amin'izao fotoana izao dia mitàna 70% amin'ny tsenam-barotra io mpandraharaha io raha, ho azy roa mitambatra kosa, SFR sy Numericable dia mitàna 20 %, saingy mikatsaka ny hahatratra ny 30 %.
Mbola tsy maintsy miandry ny faneken'ny Manam-pahefana momba ny fifaninanana izany, izay mety haharitra am-bolana vitsivitsy eo. Saingy vantany vao manan-kery io tetikasa io, azo inoana marimarina ny hitodian'ireo mpitantana orinasa mankany amin'ity safidy iray ity, raha tena tsy ampy mihitsy izany hatreto.